कृष्णप्रसाद दुलाल, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपश्चात यसका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल विभिन्न सरकारी निकायहरुसंग यो क्षेत्रको नितिगत समस्या समाधानका लागी सक्रिय छन । यसै सन्दर्भमा अर्थ र व्यापारले नाडाका अध्यक्ष दुलालसंग अटो क्षेत्रको वर्तमान अवस्था,यसका चुनौति र सम्भावनाहरु वारे कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ–नाडाका अध्यक्ष दुलालसंगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
० नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएपछि के –कस्ता एजेण्डाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनुभएको छ ?
नाडाको ४३ औं वार्षिक साधारण सभाबाट अध्यक्षमा निवार्चित भएपछि मैले यो क्षेत्रका समग्र व्यवसायीहरूको व्यवसायिक हकहितका लागि काम गर्ने नै हो । नाडाले व्यवसायीहरूका लागि व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीति बनाउन सहयोग गर्ने नै हो । हाल अटोमोबाइल व्यवसाय शिथिल अवस्थामा छ । अटोमोबाइल क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान गराउँछ । व्यवसायी भनेको सरकारले तोकेको कर तिरेर केही नाफा राखेर काम गर्ने हो । व्यवसायीले कानुन बनाउने पनि होइन र करको दर तोक्ने पनि होइन ।
नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रको विकास नहुनुको प्रमुख कारण सडकको विकास नहुनु हो । व्यवसायसँगै सडक पूर्वाधारको समेत विस्तार हुनुपर्छ । त्यसका लागि बैंकले लगानीलाई सहज बनाउनु पर्छ । हामीले केही दिनअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर समेत यो विषय राखेका छौ ं। पूर्वाधारमा लगानी भयो भने बाटोघाटोको विस्तार त हुन्छ नै त्यसले सवारी बजारलाई समेत विस्तार गर्छ । त्यसैले यो विषयमा सरकार र व्यवसायी सँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । यस विषयमा मैले बारम्बार कुरा उठाउँदै आएको छु ।
० सरकारले एकातिर राजश्व उठाउने प्रमुख क्षेत्र पनि अटोमोवाईल्स नै हो भने अर्कोतिर यो क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई पनि कसिँदै आएको देखिन्छ । अटोमोवाईल्स क्षेत्रको विकासका लागी सरकारले के गर्नु आवश्यक छ ?
पहिले मोटरसाइकलको अन्तः शुल्क र सडक मर्मत दस्तुर कम थियो । धेरै मानिसको पहुँचमा थियो र बिक्री हुन्थ्यो अनि सरकारलाई राजस्व पनि आउँथ्यो । तर, अब त्यस्तो हुँदैन । जसरी करका दर बढेका छन, यसले सवारीको पहुँच कम हुन्छ र त्यसको असर बिक्रीका साथै सरकारी राजस्वमा समेत पर्छ । हरेक नेपालीको घरमा एउटा कार नभए पनि कम्तीमा एउटा मोटरसाइकल हुनुपर्छ । आय स्रोत राम्रो नभएकाले गाडी नै किन्नुपर्छ भन्ने सरकारी भनाइ नकारात्मक नै होइन । यस विषयमा सरकारी निकायहरु संग कुराकानी गरिरहेका छौं ।
सरकारले सडकको गुणस्तर सुधार र विस्तारमा मुख्य ध्यान दिनुप¥यो । मर्मतका लागि उठाइएको कर खर्च भएको छैन । त्यो खर्च गर्नुर्पयो । वर्षौंदेखि सुनिएको नयाँ रिङरोड बनाउनुप¥यो,फास्टट्रयाक सम्पन्न गर्नुप¥यो, फ्लाइओभर ब्रिज, अन्डर पास, नदी किनारको करिडोर बनाउनुप¥यो । जसका कारण सवारी सहज रुपमा कुदाउन वातावारण बनोस । यहि सडक कायम गरेर अटो क्षेत्रको अपेक्षाकृत विकास हुन सक्दैन ।
० सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ मा सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क र सडक मर्मत दस्तुर इन्जिन क्षमताका आधारमा वृद्धि गरेको छ । यसले यो क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
सरकारको उक्त व्यवस्थाले विशेष गरी बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलको व्यवसाय धराशायी बनेको छ । पहिले धेरै मानिसको पहुँचमा थियो र बिक्री हुन्थ्यो अनि सरकारलाई राजस्व पनि आउँथ्यो । जसरी करका दर बढेका छन, यसले सवारीको पहुँच कम भएको व्यवसायीहरूले महशुस गरेका छन् । त्यसको असर बिक्रीका साथै सरकारी राजस्वमा समेत परेको देखिएको छ । सडक मर्मत शीर्षकबाट उठेको रकम सडक विस्तारमै खर्चनु पर्छ । यसले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न समेत सहयोग पु¥याउँछ । नाडाले समेत सवारी दुर्घटना कम गर्न पहल गर्नेछ । शिक्षित व्यक्तिलाई चालक बनाउने, चालकलाई लाइसेन्स दिने प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने, चालकको ड्रेस कोड हुनुपर्ने, भेइकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर लगायत सडक दुर्घटनासँग जोडिने विषयमा नाडाले आफ्नो सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्नेछ ।
० नेपालमा सवारी एसेम्बलिङको सम्भावना कत्तिको छ ? यस विषयमा व्यवसायीहरुले के सोचिरहेका छन ?
नेपालमा सवारीको एसेम्बल प्लान्ट, उद्योग खुल्नु पर्छ । त्यो सरकारी तवरबाट होस् या निजी क्षेत्रबाट होस् । एसेम्बल प्लान्ट खुल्नका लागि बजारको जरुरी हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो बजार नबनिसकेकाले यहाँ आधिकारिक बिक्रेता बनेर सवारी बिक्री गरिरहेका ठूला कम्पनीहरू आकर्षित हुनु नसकेको हो । बजारको सृजना गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई एकै खालको सुविधा दिनुपर्छ । एउटा गाडी उद्योग चल्नका लागि कम्तिमा पनि १० हजार गाडी बिक्री हुनुपर्छ । एउटा कम्पनीको १० हजार गाडी बिक्री हुने वातावरण नेपालमा बनेको छ जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन । त्यसैले व्यवसायीहरू उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको हुनुपर्छ । एसेम्बलिङ प्लान्टबाट नै हो पूर्ण उद्योग तर्फ जाने । दुईबाट मोटरसाइकल कम्पनीले एसेम्बल थालिसकेका छन् भने विस्तारै कार एसेम्बल पनि सुरु हुन्छ होला ।
मुल्य कटौती भन्दा पनि सेवा बढाउने तिर लाग्नुपर्छ
आगामी जनवरी र मार्चको बीचमा दुई वटै विमान नेपाल आउँछन
लगानीमैत्री नीति निर्माणका लागि लविङ गर्ने योजना बनाएकी छु
नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बीस वर्ष अगााडीकै अवस्थामा छ
वास्तविक व्यवसायिहरु संघ–संस्थामा जानै नचाहने भए
एउटा सरकारले निती बनाउने अर्काले भत्काउने काम भइरहेको छ
दसौं दक्षिण एसिया आर्थिक सम्मेलन आजबाट सुरु
नाट्टालाई विधान सम्मत गैह्र राजनीतिक र विशुद्ध व्यवसायिक संस्थाका रुपमा अघि बढाउछौं